EVY's Kitchen: October 2013
လူကြီးများနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်နည်းလေးပါ။ အဓိကကတော့ နို့စိမ်းကိုသုံးပါတယ်။ အုန်းနို့လည်း နဲနဲတော့ပါတယ်။ အနံ့လောက်ရအောင်ပဲ ထည့်တာပါ။ အုန်းနို့နံ့မပါတော့လည်း တစ်ခုခုလိုနေသလို့မို့လို့ပါ
အိမ်မှာချက်တဲ့ အချိုးအဆလေးတွေကို ပြန်ရေးပြလိုက်ပါတယ်. အမေနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ၂ ယောက်ပေါင်း စုပေါင်းစပ်ပေါင်း ချက်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲပေါ့။
ပထမဆုံး ကြက်သားအရိုးနဲ့အသားရောတာလေးတွေကို ဆနွင်း၊ချင်းနဲ့ ရောပြီး ရေခမ်းပြုပ်ပါတယ်။ ကြက်တစ်ခြမ်းသုံးပါတယ်။ နောက်အသားထွင်ပြီး ချင်း(လက်တစ်ဆစ်)၊ကြက်သွန်ဖြူ ၁ မွှာညက်နေအောင် ထောင်းထားတာလေးနဲ့ ဆီနဲနဲလေးနဲ့ ခြောက်နေအောင်ဆီသတ်ပါ...
မွှေးပဲစိမ်းမှုန့်အထုပ်တစ်ဝက်ကို ရေအေးနဲ့ ဖျော်ပြီး မီးပေါ်မှာဆူအောင်တည်ပါ..(ရေ ၂ လီတာခွဲ လောက်ရှိမယ်) ...ပွက်လာရင် ဆီသတ်ထားတဲ့ ကြက်သား၊ကြက်ရိုးများကိုထည့်တည်ပြီး တောက်လျောက် မပြတ်မွှေပေးပါ။
သကြား စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်းနဲ့ ထန်းလျက် ၂ ခဲကိုထည့်မွှေပါ။ နို့စိမ်းဗူးတစ်ဝက်ကိုလည်း ထည့်မွှေပေးပါတယ်။ အုန်းနို့ရည် ၁၅၀ မီလီလီတာလောက်ကိုလည်း ရောမွှေပေးပါ။ငံပျာရည် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း ၊ဆားလက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်းကိုပါရောမွှေပေးပါ။ အပေါ့အငံ မြည်းပြီးမီးအေးအေးနဲ့ နာရီဝက်လောက်တည်ပေးရင် ရပါပြီ..
ပြီးရင်တော့ ကြက်သွန်နီ၊ ငါးဖယ်ကြော်၊ ကြက်ဥ၊ငရုပ်သီးအလှော်မှုန့် နိုင်းချင်းနဲ့ အရသာရှိသော အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Evy at 11:20 AM No comments:
Labels: Burmese Food, Cooking, Noodle, အမေ့လက်ရာ
လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ ငါးပိထမင်းကြော်ကတော့ ထိုင်းရိုးရာ ထမင်းကြော်နည်းတစ်ခုပါ။ ငါးပိ၊ ပုဇွန်ခြောက်ကို သုံးပြီး ကြက်ဥကိုကြော်ပါးပါးလှီးထားတာများ ဖြူးပြီး သုံးဆောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ထမင်းချက်ပြီးသား - တရုပ်ပန်းကန်လုံး ၃ခွက်
စိမ်းစားငါးပိ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၆ ဇွန်း (ရေစားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့်နှင့်ဖျော်ပေးထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ- ၆ မွှာ
ပုဇွန်ခြောက် လက်တစ်ဆုပ်စာလျောလျော့ (ရေနဲ့ ၁၅ မိနစ်ခန့်စိမ်ထားပါ)
ဦးစွာကြက်ဥများကိုခေါက်ပြီးကြော်လိုက်ပါ။ ခပ်ပါးပါးပဲကြော်ပါ။ အေးလျှင်ပါးပါးလှီးပြီးဖယ်ထားလိုက်ပါ
နောက် ထမင်းများကို ဖျော်ထားသည့် စိမ်းစားငါးပိများနှင့် အသာရောမွှေပါ
ဆီစားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်းခန့်ကို ပူအောင်အပူပေးပြီး ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူများထည့်ကြော်ပါ
ကြက်သွန်ဖြူ အရောင်ပြောင်းလျှင် ထမင်းများကို ထည့်မွှေပြီး ကြော်ပေးပါ။ ပုဇွန်ခြောက်များကိုလည်း ထည့်မွှေပါ။ကြက်သားမှုန့်အနည်းငယ်ဖြူးပေးပြီးလျှင် ၃ မိနစ်ခန့်ကြော်ပါ။
လှီးထားသော ကြက်ဥများဖြူးကာ သုံးဆောင်ပါ။ ကြက်သွန်နီ အကြွပ်ကြော်လေးများလည်း ဖြူးနိုင်ပါသည်။ အစပ်နှစ်သက်လျှင် ငရုပ်သီး ပါးပါးလှီးကာ အပေါ်မှဖြူးကာသုံးဆောင်ပါ။
Posted by Evy at 1:20 PM No comments:
Labels: Cooking, Main Dish, rice
ပင်စိမ်းနံ့သင်းနေတဲ့ ထမင်းကြော်တစ်မျိုးပါ။ ယိုးဒယားဟင်းများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ငရုပ်သီးအစပ်က မပါမဖြစ်ပါပြီး အဲဒီအရသာကပဲ ဟင်းပွဲကိုပိုပြီးထူးခြားစေတယ်ထင်ပါတယ်
ကြက်သား အနည်းငယ် (သေးသေးလှီးကာ ဆားနှင့်နယ်ထားပါ)
ငံပျာရည် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆန် ၂ ခွက်ခွဲ ( rice cooker ထဲကခွက်) - ချက်ပြီး အအေးခံထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီးများကို ညက်အောင် ဦးစွာထောင်းပါ
ဆီစားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်းကိုပူအောင်တည်ကာ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီး ဆီသတ်ပါ။
ထို့နောက်ကြက်သား၊ငရုပ်သီးများကို ဘေးသို့တွန်းကာ ပင်စိမ်းထည့်ပြီး ကြွပ်အောင်ကြော်ပေးပါ.
နောက်ဆုံးမှ ထမင်းထည့်ကာ ငံပျာရည်၊ ပဲငံပျာရည်များရောမွှေပေးပါ
ကြက်သားမှုန့်စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းကိုရောမွှေကာ သမအောင်မွှေပေးပြီးရင် သုံးဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
နှစ်သက်ပါက ကြက်သွန်နီ အကြွပ်ကြော်များဖြူးကာလည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
Posted by Evy at 7:32 PM3comments:
Posted by Evy at 7:46 PM 1 comment:
Posted by Evy at 11:09 AM2comments: